World Famous Lover (2020) | MM Movie Store
လူ့ဘ၀ဆိုတာဟာ အခနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျပါ။ဘယျနရောမှာ ဘယျသူနဲ့တှခေဲ့တယျ ၊ ဘယျမှာနခေဲ့တယျ ၊ ဘာတှလေုပျခဲ့တယျဆိုတဲ့ ခေါကျရိုးကြိုးအခနျးတှမေဟုတျပဲ ဘယျသူနဲ့ခဈြခဲ့တယျ ဘယျသူ့ကို ခဈြခဲ့တယျ ၊ ဘယျလိုအသညျးကှဲခဲ့တယျဆိုတဲ့ သူမတူတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးတှတေော့ ကိုယျစီရှိကွမယျ ထငျပါရဲ့။
ဒီဇာတျလမျးလေးထဲမှာတော့ မငျးသား(ဂျေါသမျ)ဟာ စာရေးဆရာဖွဈလိုသူ၊ သူ့ခဈြသူ(ယမနီ – ယမငျးရုပျလို့ပဲ ဆိုပါစို့)ရဲ့အထောကျအပံ့ကို ယူ ၊ ခဈြသူနဲ့ အတူနပွေီး စာရေးဖို့ကွိုးစားနသေူပေါ့။
ဒါပမေယျ့လညျး စာရေးဆရာတို့ ၊ ပနျးခြီဆရာတို့လို အနုပညာမှျောဝငျစားတတျသူတှဟော ခဈြသူအပျေါထားရှိရမယျ့ တာဝနျ ၊ ခဈြသူအပျေါ ဂရုစိုကျရမယျ့ဝတ်တရားတှကေို မဆိုထားနဲ့ဦး ။စားဖို့ အိပျဖို့တောငျ မလြေ့ော့နတေတျကွသူတှလေေ…။
ယမနီအတှကျတော့ နစေ့ဉျအလုပျသှား၊ ပွနျလာတိုငျး ဆေးလိပျတဈဖကျ၊စာအုပျတဈဖကျနဲ့ ယောကျြားယမနီလုပျပေးခဲ့တဲ့ စားသောကျဖှယျရာတှကေို ကာတှနျးကွညျ့ပွီးထိုငျစားနတေဲ့ လငျယောကျြားကို မွငျရလိုကျညဘကျအိပျယာဝငျတိုငျး သန်ဓတေားဆေးသောကျရလိုကျနဲ့ ဘာတိုးတကျမှုမှ ရှိမလာတဲ့ လငျယောကျြားအပျေါ စိတျကုနျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီတော့ အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့အမြှ ခဈြသူနှဈဦးကွား ပဋိပက်ခတှဖွေဈလာပွီး ဘယျလိုမှ ညှိနှိုငျးလို့မရတဲ့အဆုံး…. ပွတျစဲကွရတော့တယျ….။ခဈြသူနဲ့အတူနခြေိနျမှာ ခေါငျးထဲက ဘာအကွောငျးအရာမှမထှကျသလို၊ နှလုံးသားထဲကနလေညျး ဘာမှဆှဲထုတျလို့မရခဲ့တဲ့ ဂျေါသမျဟာ စာတှရေေးဖွဈလာခဲ့တယျ။
သူရေးလိုကျတဲ့ ဇာတျလမျးတိုငျးမှာ သူကိုယျတိုငျ ဇာတျလိုကျအဖွဈနဲ့ ခံစားပွီး ရေးလိုကျတာတှကွေောငျ့ သူ့ဇာတျလမျးတှဟော သူ့စရိုကျသူ့စိတျထားနဲ့ အခဈြအပျေါ သူမွငျတဲ့အမွငျတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေော့တယျ။
ဒီဇာတျလမျးကို သရုပျဆောငျထားတဲ့သူက Geetha Govindam , Dear Comrade တို့လို ဇာတျကားလေးတှကေို ပရိတျသတျရငျထဲကို ရောကျလာခဲ့သူ Vijay Deverakonda ဖွဈပွီးမငျးသမီးကလညျး အိန်ဒိယဇာတျကားပရိတျသတျတှနေဲ့ မစိမျးလှတဲ့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသညျးကြျောလေး Raashi Khanna ဖွဈပါတယျ။
လူ့ဘ၀ဆိုတာဟာ အခန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် ၊ ဘယ်မှာနေခဲ့တယ် ၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးအခန်းတွေမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူနဲ့ချစ်ခဲ့တယ် ဘယ်သူ့ကို ချစ်ခဲ့တယ် ၊ ဘယ်လိုအသည်းကွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သူမတူတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေတော့ ကိုယ်စီရှိကြမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာတော့ မင်းသား(ဂေါ်သမ်)ဟာ စာရေးဆရာဖြစ်လိုသူ၊ သူ့ချစ်သူ(ယမနီ – ယမင်းရုပ်လို့ပဲ ဆိုပါစို့)ရဲ့အထောက်အပံ့ကို ယူ ၊ ချစ်သူနဲ့ အတူနေပြီး စာရေးဖို့ကြိုးစားနေသူပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း စာရေးဆရာတို့ ၊ ပန်းချီဆရာတို့လို အနုပညာမှော်ဝင်စားတတ်သူတွေဟာ ချစ်သူအပေါ်ထားရှိရမယ့် တာဝန် ၊ ချစ်သူအပေါ် ဂရုစိုက်ရမယ့်ဝတ္တရားတွေကို မဆိုထားနဲ့ဦး ။စားဖို့ အိပ်ဖို့တောင် မေ့လျော့နေတတ်ကြသူတွေလေ…။
ယမနီအတွက်တော့ နေ့စဉ်အလုပ်သွား၊ ပြန်လာတိုင်း ဆေးလိပ်တစ်ဖက်၊စာအုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ယောက်ျားယမနီလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ကာတွန်းကြည့်ပြီးထိုင်စားနေတဲ့ လင်ယောက်ျားကို မြင်ရလိုက်ညဘက်အိပ်ယာဝင်တိုင်း သန္ဓေတားဆေးသောက်ရလိုက်နဲ့ ဘာတိုးတက်မှုမှ ရှိမလာတဲ့ လင်ယောက်ျားအပေါ် စိတ်ကုန်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာပြီး ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အဆုံး…. ပြတ်စဲကြရတော့တယ်….။ချစ်သူနဲ့အတူနေချိန်မှာ ခေါင်းထဲက ဘာအကြောင်းအရာမှမထွက်သလို၊ နှလုံးသားထဲကနေလည်း ဘာမှဆွဲထုတ်လို့မရခဲ့တဲ့ ဂေါ်သမ်ဟာ စာတွေရေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သူရေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာ သူကိုယ်တိုင် ဇာတ်လိုက်အဖြစ်နဲ့ ခံစားပြီး ရေးလိုက်တာတွေကြောင့် သူ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာ သူ့စရိုက်သူ့စိတ်ထားနဲ့ အချစ်အပေါ် သူမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတော့တယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူက Geetha Govindam , Dear Comrade တို့လို ဇာတ်ကားလေးတွေကို ပရိတ်သတ်ရင်ထဲကို ရောက်လာခဲ့သူ Vijay Deverakonda ဖြစ်ပြီးမင်းသမီးကလည်း အိန္ဒိယဇာတ်ကားပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသည်းကျော်လေး Raashi Khanna ဖြစ်ပါတယ်။